Alternative rock သည် (alternative music, alt-rock သို့ alternative ဟုလည်းခေါ်သည်) သည် rock ဂီတ၏အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ တွင် independent music underground မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ တွင် ပို၍ ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ alternative သည် mainstream rock ဂီတမှ ကွဲပြားသော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် distorted guitar sound, subversive နှင့် transgressive စာသားတို့ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ဤစကားရပ်သည် ဂီတမျိုးဆက်သစ်များ၏ စုဆည်းထားသော ဂီတပုံစံများဖြင့် ပို၍ ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းတွင် punk rock သည် alternative ဂီတ၏ groundwork အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ underground rock အနုပညာရှင်များမှ alternative သည် ဂီတအတွက် မျက်စိကျစေသော ဖော်ပြချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် mainstream အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ punk rock မှဆင်းသက်လာခဲ့ပုံပေါ်သည်။ (punk, new wave နှင့် post-punk တို့ပါဝင်သည်)
Alternative rock သည် ဂီတ၏ ကျယ်ပြန့်သော ဝေါဟာရအဖြစ် ပါဝင်သည်။ ဂီတသံ သည် ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၁၉၈၀ အကုန်မှ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် zineများ၊ college radio အသံလွှင့်ခြင်းများနှင့် ပြောစကားများနှင့် ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ alternative rockသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အမျိုးပြားများပြားသည်။ ကွဲပြားသော ပုံစံများ သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ကူညီစေသည်။ gothic rock, jangle pop, noise pop, indie rock, indie pop, C86, Madchester, industrial rock နှင့် shoegazing စသဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဤမျိုးခွဲများသည် mainstream ကြေညာရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းအချို့ဖြစ်သော Husker Duနှင့် R.M.E တို့သည် ကိုယ်စားပြု၍ major label တွင် ရေးထိုးခဲ့သည်။ထိုအချိန်တွင် rock ၏အခြားမျိုးခွဲများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် alternative တီးဝိုင်းအများစုသည် independent label တွင် ရေးထိုးကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ mainstream radio, television သို့ သတင်းစာများဖြစ်အနည်းငယ် အာရုံစိုက်ခြင်းခံရသည်။ Nirvana ၏ထိုးဖောက်ကျော်ဖြတ်ခြင်းနှင့်အတူ ၁၉၉၀တွင်grungeနှင့် britpopတို့ လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။ alternative rock သည် mainstream သို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး တီးဝိုင်းများသည် စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။
ဆယ်စုနှစ်အကုန်တွင် alternative rock ၏ mainstream ထင်ပေါ်ကျော်စောခြင်း ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး grunge နှင့် britpopတို့ အရောင်မှိန်လာခဲ့သည်။ Lollapallooza festival ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၁ ရာစု အစတွင် post-grunge သည် Creed, Matchbox Twenty နှင့် Radiohead တို့၏ စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုတို့နှင့်အတူ post-britpop အုပ်စု Coldplay ၏ အောင်မြင်မူနှင့်အတူ စီးပွားရေးအရ ဆက်လက်ကျန်ရှိခဲ့သည်။ alternative ကမ္ဘာတွင် Emo ဂီတကို စိတ်ဝင်စားစေခဲ့သည်။ အနုပညာရှင်အများအပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး multi-platinum ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မူများ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းနှင့် ၂၀၀၀ အစောပိုင်းအတောအတွင်း alternative rock တီးဝိုင်းများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ The Strokes, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys နှင့်interpol တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ Modest Mouseနှင့် The Killers ကဲသို့ post-punk revival အနုပညာရှင်များ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းနှင့် အလယ်တွင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။
↑ Mitchell, Tony (2002). Global Noise: Rap and Hip Hop Outside the USA. Wesleyan University Press, 105. ISBN 0-8195-6502-4။ 27 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Whiteley, Sheila (2004). Music, Space And Place: Popular Music And Cultural Identity. Ashgate Publishing, Ltd., 84. ISBN 0-7546-5574-1။ 27 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternative_rock&oldid=496241" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၈:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။